आइतबार, चैत ६, २०७८ NB Media Network
कञ्चनपुर । स्टार प्रोडक्सनको आयोजना तथा महेन्द्रनगर जेसिजको सहकार्यमा महेन्द्रनगरको कबर्डहलमा सम्पन्न भएको फारवेस्टर्न कर्पोरेट क्रिकेट कप २०२२ को उपाधि विजेता मेगा साकोस भएको छ । टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको मेगा साकोसले नबिल बैङ्कलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो । निर्धारित ६ ओभरको खेलमा १ विकेट गुमाउँदै ८० रन बनाउन सफल भएको थियो ।
नबिल बैङ्कका गणेश धामीले सर्वाधिक १७ बलमा अविजित ४४ रन, विवेक बिष्टले १३ बलमा अविजित २० रन र गणेश चन्दले १० रनको योगदान गरेका थिए । मेगा साकोसका सन्तोष पन्तले १ विकेट लिएका थिए । ८१ रनको विजयी लक्ष्य पन्छाएक‍‍ो मेगा साकोसले ५.५ ओभर खेल्दै २ बिकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाउन सफल भएको थियो । मेगा साकोसका लागि किशोर खडायतले सर्वाधिक १५ बलमा अविजित ३९ रनको योगदान गरेका थिए भने सन्तोष पन्तले १७ रनको योगदान गरेका थिए । नबिल बैङ्कका राजिभ भट्टले २ विकेट लिए पनि आफ्नो टिमलाई जित दिलाउन सकेनन् ।
उक्त खेलका म्यान अफ द म्याच किशोर खडायत घोषित भएका थिए । प्रतियोगिता विजेता टिमले रु. १ लाख ५ हजार सहित आकर्षक ट्रफी, प्रमाणपत्र र मेडल प्राप्त गरेको थियो भने उपविजेता टिमले रु. ५५ हजार सहित आकर्षक ट्रफी, प्रमाणपत्र र मेडल प्राप्त गरेको थियो । प्रतियोगिताका म्यान अफ द सिरिज ओपेरा सिएमजिका हिमाल श्रेष्ठ, बेस्ट ब्याट्सम्यान मेगा साकोसका किशोर खडायत र बेस्ट बलर ओपेरा सिएमजीका हिमाल श्रेष्ठ भएका थिए । समापन समारोहमा सभापति भोजराज जोशी, प्रमुख अतिथिमा गजेन्द्र बहादुर चन्द, विशिष्ट अतिथिमा करन पाल, रघुनाथ ओझा, हेमन्त खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता सभ्य रूपमा सफल भएको स्टार प्रोडक्सनका अध्यक्ष अक्षत पाण्डेयको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ६, २०७८, १२:०५:००